यी रोग लागेका मानिसले भुलेर पनि नखानुस् काउली ज्यानै जान सक्छ । जनचेतनाको लागि सेयर गरिदिनुहोला – ताजा समाचार
यी रोग लागेका मानिसले भुलेर पनि नखानुस् काउली ज्यानै जान सक्छ । जनचेतनाको लागि सेयर गरिदिनुहोला
बजारमा हरेकतर्फ हरिया साग(सब्जीहरु देखिन थाल्छन् । यद्यपि, ती मध्ये एउटा तरकारी जुन अधिकांशलाई मनपर्छ । त्यो हो काउली अर्थात् फूल कोभी ।
काउलीको तरकारी सबैलाई उत्तिकै मिठो लाग्छ । तरकारीमात्र होइन काउलीको पराठा तथा पकौडा पनि निकै मन पराइन्छ । काउलीको सेवन स्वास्थको दृष्टिकोणले निकै नै फाइदाजनक छ । किनभने काउलीमा भिटामिन क्याल्सियम, प्रोटिन, पोटासियम, कार्बोहाइड्रेट, आइरल मिनरल्स एन्डिअक्सिडेन्ट, फाइटोन्यूट्रियन्ट्स, फ्लेवोनोइड्स, फाइटोन्यूट्रियन्स आदि भरपूर मात्रामा पाइन्छ । यी सबै तत्वहरु हाम्रो शरीरको लागि अति नै फाइदाजनक हुन्छन् । यो तरकारीले हामीलाई धेरै प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरुबाट जोगाउने गर्छ । जस्तै एनिमिया, मेनोपोज, स्कर्बी, ब्रेस्ट क्यान्सर, मुटुरोग आदि । यसबाहेक काउलीको सेवनले शरीरको तौल घटाउन समेत सहयोग पुग्छ ।
जाडोमा अधिकांशलाई अत्यधिक मनपर्ने तरकारी हो, काउली (फूल कोभी) । फाइदै-फाइदाले भरिएको काउलीले कसैको स्वास्थलाई कसरी बेफाइदा र्पुयाउला ? काउलीले केही रोगका बिमारीहरुलाई भने पक्कै बेफाइदा र्पुयाउँछ । केही मानिसहरुको स्वास्थका लागि काउलीको सेवन राम्रो मानिँदैन । यसको सेवनले उनीहरुको समस्या अझै बढ्न सक्छ । यो कुरा झट्ट सुन्दा पत्याउनै गाह्रो पर्छ । किनभने अति नै फाइदाजनक यो तरकारीलाई कसलाई पो हानि र्पुयाउला जस्तो लाग्छ । सायद तपाईंको दिमागमा पनि यो जिज्ञासा पैदा भइरहेको होला । वास्तवमा यो सत्य हो । जानौं कसरी ?
थाइराइड दुई प्रकारको हुन्छ (हाइपो थाइराइड तथा हाइपर थाइराइड) । हाइपो थाइराइडमा थाइराइड ग्ल्याण्ड एक्टिभ हुन सक्दैन । जसबाट शरीरमा टि थ्री, टि फोर हार्मोन पुग्न सक्दैन । चिकित्सकहरुका अनुसार हाइपो थाइराइडबाट पीडित महिलाहरुले काउली खानबाट बच्नुपर्छ । किनभने यसमा गाइट्रोगन नामक तत्व पाइन्छ । जुन थाइराइड ग्ल्याण्डको कामलाई बाधा उत्पन्न गराउँछ ।
ग्याष्ट्रिकबाट पीडित महिलाहरु डाइटिसियनहरुका अनुसार काउलीमा त्यस्ता पोषक तत्वहरु पाइन्छन् जसले पाचन प्रणालीलाई नै समस्या पैदा गरिदिन सक्छ । त्यसैले काउली भनेको ग्याष्ट्रिकका लागि समस्या हो । त्यसैले ग्यास्ट्रिकबाट पीडित व्यक्तिहरुले काउलीको सेवन गर्नबाट बच्नुपर्छ ।
यसबाहेक शिशुलाई दुध खुवाइरहेका आमाहरुले पनि काउली सेवन गर्नुहुँदैन । उनीहरुलाई पनि ग्याष्ट्रिकको समस्याले सताउन सक्छ । यसबाहेक जो महिलाहरुलाई अर्थराइटीसको समस्या हुन्छ । उनीहरुले पनि काउली खानबाट बच्नुपर्छ । किनभने काउलीले पेटमा ग्यास बढाउँछ र त्यसले हड्डीहरुमा पीडा हुन थाल्छ ।
यसबाहेक काउलीमा भिटामिन-के अत्यधिक मात्रामा पाइन्छ । भिटामिन- के ले शरीरको ब्लड कटिङमा सहयोग र्पुयाउँछ । यदि मानिसको शरीरमा यो भिटामिनको कमी भयो भने शरीरको भित्री अंगहरुमा आन्तरिक ब्लिडिङ हुनसक्छ । जुन निकै खतरनाक हुनसक्छ । त्यसैले रगतलाई गाढा बनाउनेका औषधि सेवन गरिरहेका महिलाहरुले पनि काउलीको सेवन गर्नबाट बच्नुपर्छ ।
काउलीको स्वाद अधिकांशलाई मनपर्छ भन्ने कुरामा त अब द्विविधा नै छैन । साथै यो स्वास्थका लागि धेरै नै फाइदाजनक पनि छ । यद्यपि, हरेक कुराको सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्ष हुन्छ भनेजस्तै काउलीको पनि दुबै पक्ष देख्न सकिन्छ । त्यसैले यदि तपाईं पनि माथि उल्लेख गरिएकामध्ये कुनै समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ भने काउलीको सेवनबाट बच्नुपर्छ ।
यी सात अवस्थामा खान हुँदैन तीतेकरला । जुन विष सरह हुनेछ ।
अन्तिम पटक अपडेट गरिएको : February 16th, 2020,